Vanhu Gumi neVanomwe Vofa neCovid-19 Hurumende Ichikurudzirwa Kutevedzera Zvainotaura paNyaya yeKudzivirira Chirwere Ichi
Bazi rezvehutano rinoti vanhu gumi nevanomwe vakafa nechirwere cheCovid-19 nemusi weMugovera zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemakamumi mapfumbamwe kana kuti 4, 090.
Vanhu mazana matatu nemakumi mana nevashanu kana kuti 345 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho vave zana rezviuru negumi nepfumbamwe nemazana masere nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 119, 853.
Vanhu mazana mashanu nemakumi masere nemumwe kana kuti 581 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi mapfumbamwe nematanhatu zvine mazana manomwe negumi nevatanhatu kana kuti 96, 716.
Vanhu mamiriyoni maviri nezviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 2, 036, 299 vabayiwa nhomba yekudzivirira Covid-19 kekutanga.
Vanhu miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi mapfumbamwe nevasere zvine mazana matatu nemakumi masere nechimwe kana kuti 1, 198, 381 vabayiwa nhomba yeCovid-19 kechipiri. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi kuyedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19.
Bazi rezvehutano rinoti chirwere ichi hachichanyanye kupararira zvakanyanya munzvimbo dzange dzichinzi dziri munjodzi huru richiti izvi zvakakonzerwa nedzidziso iri kupihwa nezvechirwere ichi.
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nemusi weMuvhuro svondo rapera vakawedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba nemamwe mavhiki maviri vachiti kunyangwe huwandu hwevari kyabtwa nechirwere ichi have kudzikira, huwandu hwevari kufa huchiri hwakawandisa pane zvinotarisirwa.
Vachipawo pfungwa dzavo, munyori anoona nezvehutano mubato reMDC Alliance Dr Henry Madzorera vanoti zvekungoti vanhu vagare mudzimba asi vamwe vachienderera mberi vachiunganidza vanhu vachiita zvematongerwo enyika hazvibatsire.
Mamwe madzishe nebato reZanu-PF nevamwe vari mumubatanidzwa wemapato ari muPolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD vari kuenderera mberi nekuita misangano kunyangwe veMDC Alliance nevamwe vasiri mugungano iri vari kurambidzwa kuita misangano yavo nemapurisa achiti ari kuda kumisa kupararira kwechirwere cheCovid-19.